Madaxweyne Cosoble oo soo dhaweyey ansixinta Golaha Wasiiirada Hirshabelle - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Madaxweyne Cosoble oo soo dhaweyey ansixinta Golaha Wasiiirada Hirshabelle
Madaxweyne Cosoble oo soo dhaweyey ansixinta Golaha Wasiiirada Hirshabelle
March 11, 2017 admin734
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa soo dhaweeyey ansixintii Golaha Wasiirrada cusub ee Hirshabeelle ee uu dhowaan soo magacaabay, iyadoo Baarlamaanka Hirshabeelle tallaabada horumarka leh ay Codka Kalsoonida ku siiyeen Golaha Wasiirada uu ku ammaanay.
Barlamaanka ayaa maanta u codeeyay si aqlabiyad ahna ku ansixiyay xukuumadda cusub ee uu Madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble soo dhisay dhowaan, kuwaasi oo la filayo in ay ka soo dhalaalaan waajibaadka Qaran ee loo igmaday, iyadoo Wasiirrada maanta la ansixiyay ugu hambalyeeyay waajibaadka shaqo ee u billaabatay, waxaana uu faray in bulshada ay tusiyaan waxqabad muuqda.
“Waxaan soo dhaweynayaa isla markaana ammaanayaa sida mas’uuliyadda ku jirto ee Dimuqraadiyadda ah ee baarlamaanka Hirshabeelle u ansixiyeen wasiirada. Tani waa tallaabo dhanka horumarka loo qaaday oo ay tahay shaqsi walba inuu soo dhaweeyo, Ansixintan Golaha Wasiirada oo matala dhammaan shacabka Deeganada Hirshabeelle ahna danta shacabka ayaa waxay shacabka iyo caalamkaba tuseysaa in hay’adaheenna dowliga ah ay yihiin kuwo mas’uuliyada ballaaran ee saaran u gudan kara si muhiim ah,” ayuu yiri madaxweynaha Hirshabeelle.
Sidoo kale, madaxweynaha Dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Cosoble oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri: “Waxaa hadda lama huraan ah in xukuumadda cusub ay billowdo howlaha muhiimka ah ee horyaalla, hase ahaatee dadkeenu waxay ka sugayaan in horumar laga sameeyo dhan walba.”
Ugu dambeyn, Madaxweyne Cosoble wuxuu hadalkiisa ku sheegay in Barlamaanka uu horyaallo ka doodista shaqooyinka laga sugayo iyo shuruucda muhiimka u ah dowladnimada loona baahan yahay in ay taasi xoojiyaan.
Faafaahin Qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
Jubaland oo xayiraadi ka qaaday masuuliyiinta dowlada soomaaliya